ယန်းမာ ဝက်ဆိုဒ်မှ ကြိုဆိုပါ၏
ယန်းမာ ဝက်ဆိုဒ် https://yanmar.com/ နှင် http://www.yanmar.co.jp ဤ ဝက်ဆိုဒ်ကို အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် သင် နှင့် ဤဝက်ဆိုဒ်ကိုအသုံးပြုသူ( စက်ဝယ်ယူအသုံးပြုသူများကို ရည်ရွယ်ပါသည်) တို့သည် အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော အခြေနေများနှင့် စည်းကမ်းများကို သိရှိနားလည်ပြီး သဘောတူပြီးသားဖြစ်ရပါမည်။
ယန်းမာ အုပ်စုအဖွဲ့ ကုမ္ပဏီများသည် ယန်းမာ၏ ကိုယ်ရေး မူဝါဒလမ်းစဉ်များတွင်ဖော်ပြထားသော ကုမ္ပဏီများအားလုံးကို ရည်ရွယ်ပါသည်။
ဝယ်ယူအားပေးသူများ၏ ကိုယ်ရေးအချက်လက်များကို ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းခြင်းများအတွက် ယန်းမာ ကိုယ်ရေးမူဝါဒများကို ပြုလုပ်ပေးနေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အသုံးပြုသူများ စိတ်အေးသက်သာစွာဖြင့် ဝက်ဆိုဒ်ကို အသုံးပြုနိုင်စေရန်အတွက် ယန်းမာသည် ကိုယ်ရေး မူဝါဒ လမ်းစဉ်များဖြင့် ထိန်းချုပ်လုပ်ဆောင်နေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ကိုယ်ရေးသတင်းအချက်လက်များ ကာကွယ်ခြင်းများကို အသေးစိတ်လေ့လာခြင်းဖြင့် ကိုယ်ရေးမူဝါဒ များကို ကျေးှဇူးပြုပြီးလေ့လာပါ။
2. ကိုယ်ရေးသတင်းအချက်လက်များအား ထုတ်ဖော်ပြသနေချိန်များအတွက် ကြိုတင်သတိပေးချက်များ
ကိုုယ်ရေး မူဝါဒ လမ်းစဉ်များ နှင့် အောက်ဖော်ပြပါ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ နှစ်မျိုးလုံးအား ဖတ်ကြည့်နားလည် သဘောတူပြီးမှသာလျှင် ကိုယ်ရေး သတင်းအချက်လက်များအား လေ့လာခွင့်ပြုပါမည်။
3. သိမြင်နိုင်သည့်ပိုင်ဆိုင်မှု အခွင့်ရေးများ
ကုန်သွယ်မှု အမှတ်သားများ၊ ဒီဇိုင်းများ၊ ဓါတ်ပုံများ၊ စီမံထားမှုများ နှင့် စာအရေးသားများ အပါဝင် ဝက်ဆိုဒ်ပေါ်တွင် ဖော်ပြထားသော သတင်းများနှင့် ခေါင်းစီးများအားလုံးကို မူပိုင်ခွင့် ဥပဒေ၊ ကုန်သွယ်ခွင့် ဥပဒေများ နှင့် အခြားကာကွယ်ခွင့် ဥပဒေများဖြင့် ကာကွယ်ထားပါသည်။
4. ကြည့်ရှုမှတ်တမ်းများနှင့် တစ်ဦးချင်းလေ့လာမှုများ၏ အသုံးဝင်မှုများ
ဤဝက်ဆိုဒ်တွင် တစ်ဦးချင်းစီ အသုံးပြုမှု မှတ်တမ်းများကို စာရင်းဇယားများပြုလုပ်ပေးပြီး ဝက်ဆိုဒ်အသုံးပြုမှုနှင့် အသုံးပြုသူ ဝင်ရောက်ခြင်းတို့ အဆင်ပြေစေရန် နှင့် အသုံးပြုသူများအတွက် ဖော်ပြမှုများ ကြော်ငြားများ ကို အဆင်ပြေစေရန် အတွက် သတင်းချက်လက်များကို အသုံးပြုထားပါသည်။ အသုံးပြုမှုမှတ်တမ်းများဆိုသည်မှာ အသုံးပြုသူ၏ ကွန်ပျူတာတွင် ထိန်သိမ်းထားမှုများ၊ ဝင်ရောက်မှုပိုင်းများတွင် သတင်းအချက်လက်များ ထိန်းသိမ်းထားခြင်းများနှင့် ဝက်ဆိုဒ် အသုံးပြုမှတ်တမ်းများ အားလုံးကို ဆိုလိုပါသည်။
ဝက်ဆိုဒ်တွင် အသုံးပြုထားသော မှတ်တမ်းများတွင် လူပုဂ္ဂိုလ်ရေး ပိုင်းသတ်မှတ်ချက်များ မပါဝင်ပါ။ ယန်းမာ၏ ကိုယ်ရေးသတင်းအချက်လက် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီ အကျုံးဝင်သော အသုံးပြုသူ၏ သတင်းများကို ပေါင်းစပ်ပြီး မှတ်တမ်းများကို အသုံးပြုနေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အသုံးပြုနေသော မှတ်တမ်းများကို ကိုယ်ရေးအချက်လက်များအနေဖြင့် အသိမှတ်ပြုထားသလို ကိုယ်ရေး မူဝါဒ လမ်းစဉ်များနှင့်အညီ ယန်းမာမှ လိုက်နာဆောင်ရွက်ပြီး ကိုင်တွယ် စီမံဆောင်ရွက်ထားပါသည်။
ဤဖြစ်စဉ်များနှင့်ပတ်သတ်ပြီး အသုံးပြုသူမှ မှတ်တမ်းများအား အသိမှတ်မပြုလိုလျှင် အသုံးပြုသူသည် သတင်းအချက်လက်မှတ်တမ်းများကို အသုံးမပြုဖို့ တားမြစ်နိုင်စွမ်းရှိနိုင်ပါသည်။ထိုသို့ မှတ်တမ်းများဖယ်ရှားခြင်းများသည် ဝက်ဆိုဒ်၏ လုပ်ငန်းဆောင်တာအချို့အား အနှောင့်ချက်ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။
ဤ ဝက်ဆိုဒ်တွင် သတင်းထုတ်ပြန်ချက်များ ပါဝင်ပါသည်။ ယန်းမာ ကုမ္ပဏီမှ ထိန်းချုပ်ခြင်းများပြုလုပ်ပါသည်။ အများပြည်သူများအတွက် သတင်းအချက်လက်များကို သတင်းထုတ်ပြန်ချက် နေရာတွင် တင်ပြပေးသောကြောင့် ကိုယ်ရေးသတင်းအချက်လက်များကို သတိထားကြည့်စေရန်မှာ အသုံးပြုသူများ၏ တာဝန်သာ ဖြစ်ပါသည်။
ဤဝက်ဆိုဒ်တွင် တတိယမြောက် ပါတီအဖွဲ့ဝင်များမှ ကမ်းလှမ်း၍သော်လည်းကောင်း သို့မဟုတ် ထိန်းချုပ်ထားသော အခြား အပြင် ဝက်ဆိုဒ်များနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော နေရာများလည်းပါဝင်ပါသည်။
ဝက်ဆိုဒ်များသို့ တရားမဝင်ချိတ်ဆက်ခြင်းများပြုလုပ်ခြင်း တည်ထောင်ခြင်းများကို တားမြစ်ထားပါသည်။
ဝက်ဆိုဒ်များနှင့်ချိတ်ဆက်ချင်သော မည်သူမဆို ယန်းမာ နှင့် ဆက်သွယ်ရပါမည်ဖြစ်ပြီး ခွင့်ပြုချက်ရယူရပါမည်။
ယန်းမာသို့ဆက်သွယ်သည့်အချိန်တွင် အသုံးပြုသူများသည် မဖြစ်မနေ ဖြည့်စွပ်ရမည့်အရာများ ( နာမ်မည်၊ ကုမ္ပဏီအမည်၊အဖွဲ့စည်းအမည်၊တာဝန်ခံ အမည်၊ ဖုန်းနံပါတ်၊ ဝက်ဆိုက် အမည်များ) ကို အောက်ပါ စည်းမျဉ်းများကို သေချာဖတ်ပြီးနားလည်းသဘောတူပြီးမှ ဖြည့်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေ။
စည်းမျဉ်းများအရ၊ ယန်းမာ မှ တောင်းဆိုထားသော အချက်လက်များနှင့်ဆက်စပ်နေသောအကြောင်းရာများကို နှစ်ပတ်အတွင်း ပြန်လည်အကြောင်းကြားပေးပါလိမ့်မည်။ တာဝန်ရှိသူမှ ခွင့်ပြုခြင်းမပြုခင် ဝက်ဆိုက် ချိတ်ဆက်မှုများကို တားမြစ်ထားပါလိမ့်မည်။
ယန်းမာသည် ဘောင်များဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော အချိတ်ဆက်နေရာများကို ခွင့်ပြုမည်မဟုတ်ပါ။ ယန်းမာ၏ တရားဝင် အမှတ်တံဆိပ် များကို ကျေးဇူးပြု၍ အသုံးပြုပေးစေလိုပါသည်။
စံချိန်စံညွန်းအရ ချိတ်ဆက် ဆက်သွယ်ရမည့် လိပ်စာကို အပေါ်ဆုံးမှာ ညွန်ပြထားပါသည်။ ဤနေရာတွင် အသုံးပြုသူမှ အခြားစာမျက်နာသို့ ချိတ်ဆက်ချင်ပါက အသုံးပြုသူသည် သွားရောက်လေ့လာချင်သော အခြားစာမျက်နာ၏ ကုဒ်အမှတ်သားများကို သေချာစွာဖော်ပြပေးရမည်။
ယန်းမာမှ လိုအပ်သည့်ပြောင်းလဲမှုများကို လုပ်ဆောင်သွားပါမည် သို့မဟုတ် ဖော်ပြချက်များကို အသိပေးမှုမရှိပဲ ဖြတ်တောက်သွားပါလိမ့်မည်။
ဝက်ဆိုက်အတွက် လျောက်လွာတင်သွင်းထားချိန်တွင် ရရှိထားသော မည်သည့် ကိုယ်ရေးသတင်းအချက်လက်များကိုမဆို ကိုယ်ရေးမူဝါဒလမ်းစဉ်အရ လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် စီမံဆောင်ရွက်ပါလိမ့်မည်။
ယန်းမာသည် အောက်ပါဖော်ပြထားသော ချိတ်ဆက်ရမည့်နေရာများအား ခွင့်ပြုပေးမည်မဟုတ်ပါ။
ယန်းမာ အုပ်စုအဖွဲ့ ကုမ္ပဏီများ သို့မဟုတ် တတိယ အဖွဲ့စည်း တို့၏ မူဝါဒလမ်းစဉ်များ သို့မဟုတ် လူ့အခွင့်ရေးများ၊ ဂုဏ်သတင်းများ ပိုင်ဆိုုင်မှုများကိုးချိုးဖောက်နေသော မည်သည့် နေရာများမဆို။
ယန်းမာ အုပ်စုအဖွဲ့ ကုမ္ပဏီများ သို့မဟုတ် တတိယ အဖွဲ့စည်းတို့၏ ယုံကြည်ကိုးစားမှုများကို ဆုံးရှုံးစေသော အကြောင်းရာများ သို့မဟုတ် အတင်းစကားပြောသည့်သဘောသက်ရောက်စေသည့် နေရာများ သို့မဟုတ် ထိုသို့သဘောသက်ရောက်စေသည့် ချိုးဖောက်နေသာ မည်သည့်နေရာများမဆို။
ယန်းမာ အုပ်စုအဖွဲ့ ကုမ္ပဏီများ သို့မဟုတ် တတိယ အဖွဲ့စည်းတို့၏ မူပိုင်ခွင့်များအပါဝင် ပိုင်ဆိုင်သည့်အရာများနှင့်ပတ်သတ်၍ ချိုးဖောက်ခြင်းတို့ပြုလုပ်နေသော မည်သည့်နေရာများမဆို။
အများပြည်သူများနှင့်သက်ဆိုင်သော အမိန့်စာများနှင့် စာရိတ္တပိုင်းများတွင် စည်းကမ်းချိုးဖောက်နေသော မည်သည့် နေရာများမဆို။
ခွင့်ပြုချက်ရရှိပြီးသား လင့်ခ် များကို ပြန်လည် ဖယ်ရှားပေးဖို့ရန် တတိယ အဖွဲ့စည်းများမှ ထိန်းချုပ်ထားသော ဆိုက်များကို မေတ္တာရပ်ခံနိုင်ပါသည်။ ယန်းမာ စည်းကမ်းများဖြင့် သေချာ ခွင့်ပြုချက်မရသော ဆိုက်များကို မဆိုလိုပါ။
ယန်းမာ မှ ဖယ်ရှားပေးဖို့ တောင်းဆိုပါက ချက်ချင်း ဖယ်ရှားပေးရမည်။
တတိယ ပါတီ အဖွဲ့များမှ ထိန်းချုပ်ထားသော ဆိုက်များသည် ယန်းမာ၏ စီမံထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင် မရှိနေပါက ယန်းမာမှ တာဝန်ယူလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ မည်သို့သော အကြောင်းရာများကိုမဆို ဆိုလိုပါသည်။
8. အသုံးပြုသူများအနေဖြင့် အဆိုပြုချက် (ငြင်းဆို)
ယန်းမာမှ ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးမှုအဖြစ်၊ မည်သည့်အကြံပြုချက်မဆို ၊ အကြံဉာဏ်များ၊ အဆိုပြုချက် (သို့မဟုတ်)ထောက်ပံ့ပေးသည့်အချက်အလက်များ အား ယန်းမာမှု သုံးစွဲသူများသို့ အောက်ပါအချက်များအတိုင်း ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပေးပါသည်။
မည်သည့် အကြံဉာဏ်၊အကြံပြုချက်များ၊အဆိုပြုချက်များ (သို့မဟုတ်)ထောက်ပံ့ပေးသည့်အချက်အလက်များ ၊အမှု၏ခြွင်းချက်နှင့်အတူ တရားဝင်အဆိုပြုမှုများအတွက် အများပိုင်တောင်းဆိုမှုကိုတင်ပြခြင်းများအား ယန်မားမှ လက်ခံလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
အီလက်ထရောနစ် မေးဖြင့်မည်သည့် အကြံဉာဏ်၊အကြံပြုချက်များ၊အဆိုပြုချက်များ (သို့မဟုတ်)ထောက်ပံ့ပေးသည့်အချက်အလက်များ အား အား ယန်မားမှ လက်ခံလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
အထက်ပါဖော်ပြချက်များအရ ယန်းမာမှ အီလထောနစ် မေး သို့မဟုတ် စာတိုက်ဖြင့် လက်ခံရရှိသော မည်သည့်မကြံပြုချက်များ၊ စိတ်ကူးများ၊ အဆိုပြုချက်များအရ ဤအကြံပြုချက်များပို့ဆောင်သော အသုံးပြုသူများသည် အောက်ပါ အခြေနေများကို သိရှိနားလည်သဘောပေါက်ပြီးသားဟုယူဆပါမည်။
ယန်းမာသို့ ပို့ဆောင်ပေးသော မည်သည့်မကြံပြုချက်များ၊ စိတ်ကူးများ၊ အဆိုပြုချက်များမဆို အခြေခံ လျို့ဝှက်ချက်များအနေဖြင့် ရှိနေသေးမည်မဟုတ်ပါ။ လျို့ဝှက်တာဝန်အနေဖြင့် မသက်မှတ်သေးပါ။
အကြံပြုချက်များ စိတ်ကူးများ အဆိုပြုချက်များ သို့မဟုတ် အခြားအရာများအတွက် လက်ခံခြင်း အကဲဖြတ်သုံးသက်ခြင်းများ လုပ်ဆောင်ရန်အတွက် ယန်းမာကို တာဝန်ရှိသူဟုမသက်မှတ်ပါ။
ပြပွဲများတွင် အများပြည်သူများအား ထုတ်ပြန်ကြေငြာထားသည့် ယန်မား ထုတ်ကုန်များ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများ ၊ ဆင်တူ သို့ မည်သည့် အကြံပြုချက်များအားလုံး သို့ တစိတ်တပိုင်းအားဖြင့်တူညီမှု ၊ စိတ်ကူးစိတ်သန်းများ၊ အဆိုပြုချက် သို့မဟုတ် ယန်မားထံသို့ ပို့ဆောင်ထားသော ပစ္စည်းများ၊ တစုံတရာ အတွက် ယန်မားမှ တာဝန်မယူပါ၊ သုံးစွဲသူအတွက် (သို့) တတိယ အဖွဲ့အည်းအတွက် လျော်ကြေးပေးဆောင်မည်မဟုတ်ပါ။
ယန်းမာသို့ဆုံးရှုံးရန် (သို့မဟုတ်) ပျက်စီးဆုံးရှုံးစေရန် လုပ်ဆောင်မှုများ (သို့) မည်သည့် တတိယ ပါတီမဆို
ပြစ်မှုဆိုင်ရာလုပ်ရပ်များ (သို့မဟုတ်) ရာဇဝတ်မှုလှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူ ဆက်နွယ်နေကြောင်း မည်သည့်လုပ်ရပ်မဆို
ယန်းမာထံမှ ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာသဘောတူညီချက်မပါဘဲ လုပ်ငန်း(သို့မဟုတ်) ရောင်းအားလှုပ်ရှားမှုများ
ကွန်ပျူတာ ဗိုင်းရပ်ပိုးများ ပျံ့နှံပါဝင်စေရန် မည်သည့်လျှို့ဝှက်လုပ်ကြံမှုများ မဆို
အပလီကေးရှင်းများ ၊ အသိပေးချက်များ ၊အစီရင်ခံစာများ တစ်ခု(သို့မဟုတ်) လိမ်လည်မှုကို အီးမေးလိပ်စာ ၊ဒါမှမဟုတ် တတိယလူတစ်ဦးသို့မဟုတ် ပါတီပိုင် အီးမေးလိပ်စာကိုသုံးပြီး အခြားမည်သည့်ဆက်သွယ်ရေး၏လက်အောက်ခံအဖြစ်ဆက်သွယ်ခြင်း။
အဆိုပါဝက်ဆိုက် အသိပေးစာမပါပဲ ထုတ်ဝေခြအကြောင်းအရာအား ပြောင်းလဲခြင်း (သို့) ပယ်ဖျက်ခြင်း များလုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။
ဝက်ဆိုက်အားပြုပြင် ထိန်းသိမ်းခြင်းလုပ်ဆောင်နေစဉ် အချက်အလက်များတိကျမှန်ကန်ရန် (သို့မဟုတ်) ယင်းဝက်ဆိုက်ပေါ်တွင်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသည့် ပစ္စည်းများ၏ အချက်အလက်များအား ယန်းမာမှ အာမခံ မပေးပါ။
အသုံးပြုသူကြောင့် ဖြစ်ပေါ်သည့် မည်သည့်ပျက်စီး ဆုံးရှုံးမှုမဆို ယန်မားမှ တာဝန်ယူလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ထိုသည်ကား အသုံးပြုခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း (သို့) ဝက်ဆိုက်ကိုအသုံးမပြုနိုင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါဝက်ဆိုက်တွင် ထုတ်ကုန်၏ အချက်အလက်များ (သို့) ဝန်ဆောင်မှုများ ပါဝင်ပါလိမ့်မည်။ ထိုအချက်အလက်များအား အချို့နိုင်ငံကြီးများတွင် (သို့မဟုတ်)တိုင်းဒေသကြီးများတွင် အသုံးပြုနိုင်ရန် ရရှိနိုင်လိမ့်မည် မဟုတ်ပါ။ထို ကိစ္စအပေါ်တွင် သင်၏သိရှိနားလည်ပေးရန် ယန်မားမှ တောင်းဆိုအပ်ပါသည်။
11. အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဥပဒေ နှင့် စီရင်ပိုင်ခွင့်
ဝက်ဆိုဒ် အသုံးပြုခြင်း နှင့် အသုံးပြုရမည့်အခြေအနေများအား ဂျပန် ဥပဒေနှင့် အညီ ထိန်းချုပ်ထားလိမ့်မည်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါဝက်ဆိုက် အသုံးပြုမှု ကြောင့်ဆက်စပ်ဖြစ်ပေါ်လာသည့် မည်သည့် အငြင်းပွားမှုအားမဆို အိုဆာကာ ခရိုင်တရားရုံး၏ သီးသန့်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်အောက်တွင်သာ ဖြေရှင်းမည်ဖြစ်သည်။